kuyinto enkulu epaki "Fantasy" egibele ngenjongo lesithathu idolobha elikhulu kunawo wonke-Russian of Vladivostok. Baningi abakhileyo eMpumalanga Ekude bathanda uphumule kule emangalisayo enhle futhi kwafunwa indawo.
Yini ekule kwepaki
Ufuna ukuthi bayaphi e Vladivostok, kufanele sinake ipaki "Fantasy". Njengoba iyona enkulu kunazo zonke ipaki kule ingxenye yeRussia, kukhona ugibele ezingefani ezingaphezu kuka-40, futhi ebusika linikeza ezinkulu ice rink ice slide endaweni evulekile ne sigqoka amakamelo efudumele. Noma ubani angakwazi ukuqasha skates, tubing.
On the indawo kukhona igumbi elikhulu nge inqwaba slot machines, amathilomu eziningana, okuyinto ungakwazi ukujabulela kokubili abadala kanye nezingane.
Rides for abancane
Ukuze nabancane kukhona igumbi ezithambile ngokuthi "Jungle". Isebenzisa nannies lochwepheshe abanakekela izingane, izindleko le sevisi emananini ithikithi.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-iminyaka emihlanu, has ezikhangayo ezilandelayo:
Caterpillar nabanye abaningi.
Zonke lezi ezikhangayo anikezwa uvakashele izingane nabazali bazo.
Ezokuzijabulisa wonke umndeni kuyinto Go-Kart, ahlukahlukene amanzi jika wesifunda. Ngo kwepaki kukhona okuningi flowerbeds amahle eziqoshiwe inganekwane nezinhlamvu. Ukuthatha epaki, ungakwazi izithombe, futhi lezi zikhathi emihle uphawu lokuphila.
Umkhakha osanda kubalwa uthando umndeni ukuthatha izithombe endaweni ekhethekile eliqoshiwe. Cishe kuyo yonke imishado albhamu yezithombe has isithombe abasanda kushada endaweni enhle kangaka, efana epaki "Fantasy" (Vladivostok).
Ukuze izingane ezindadlana kukhona ezikhangayo kakhulu:
roller zivuleka a boomerang;
kanti ethandwa kakhulu - i umkhumbi pirate.
Ngo ugibele ezifana izingane avunyelwe kanye nabantu abadala, ukukhula eyeqa 150 cm.
Ipaki yokuzijabulisa "Fantasy" (Vladivostok) - nje yindawo enhle ngesikhathi esifanayo ke ongama kubantu 1,500. Imali yokungena kuyinto ruble angu-50 kuphela. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe ride iyi-ruble 150 kuya 350, kuyacaca ukuthi amanani anele ezingabizi kuyinto epaki "Fantasy" (Vladivostok). Ukusebenza amahora: kusuka 11 ekuseni kuya ku-18 ntambama ngoMgqibelo nangeSonto. Phakathi nezinsuku, epaki akusebenzi.
Etholakala eduze kwepaki Paid yokupaka kanye yokupaka, okuyinto nakanjani elula izivakashi "Fantasy".
ngaphezu yokuzijabulisa Ezokuzijabulisa
Ehlobo, cafe ongaphandle, eduze lapho zonke izingane kungenziwa izithombe ezihlukahlukene zokubhukuda. Ungakwazi ukuqasha suit I-ruble angu-300 futhi ukuba izithombe ikhamera yakho, uma akusiyo ngani nawe, bese photo ngamunye suit kuyodingeka bakhokhe ruble 150.
Ngenkathi lwalumumethe eziningi izinhlelo ukuzijabulisa ezahlukene izingane nge imincintiswano kanye giveaways, Raffles. Ngezinye izikhathi kusihlwa emangalisayo abadala ngokuthi "umuntu eseyingane." Kunconywe ukuvakashela lesi senzo.
Ipaki "Fantasy" (Vladivostok) has a inombolo enkulu amathilomu lapho ungakwazi nje uphumule nezingane zabo ukuba ahambele ezikhangayo, kodwa futhi ukuze uqiniswe ephathini yelusuku lwekutalwa noma umshado.
A ebaleni lokudlala for abancane itholakala endaweni enganakiwe. Ngo sezulu libalele, izingane kufanele elangeni, ahlale emthunzini ngeke zisebenze.
Esikhathini cafe "Caramel" amanani ayizange izingane akudingeki ezengeziwe ukuzijabulisa izingane. amanani aphezulu ku ugibele, ngokwesilinganiso, umndeni ka amane uchitha i ukushaywa umoya epaki "Fantasy" (Vladivostok) kusuka ezintathu namakhulu ayisishiyagalombili. yigalelo elinzima kakhulu isabelomali i ngokwesilinganiso umkhaya.
Uma ukhetha ukuthi bayaphi e Vladivostok njengomkhaya, bese kuba yindawo engcono yokuthola kuka epaki "Fantasy". Le ndawo isiqiniseko ukujabulisa izingane nabazali bazo. Indawo enkulu kakhulu, lapho ungakwazi ukuhamba Nokho usuku lonke hhayi ngizithola. Eduze kwepaki kukhona kuqashelwe yokupaka, futhi insimu yalo kukhona amathilomu eziningi, zezimbali, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu namabhentshi. Ingane ngayinye ithola ride lomphefumulo, ngoba nanka emashumini amane.
I-pasta enezilwane zasolwandle. Iresiphi
Amic Gala 3 * (Mallorca, Spain): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Ukubhukuda ngomntwana - yilokho okulungile?
Ingabe uyazi zokupheka Easter?